SEHATRY NY FITSABOANA :: Mpitsabo mpanampy an-jatony hokaramain’ny mpiara-miombon’antoka • AoRaha
SEHATRY NY FITSABOANA Mpitsabo mpanampy an-jatony hokaramain’ny mpiara-miombon’antoka
Mpitsabo mpanampy sy mpampivelona miisa dimy amby telopolo amby zato no hokaramain’ny mpiara- miombon’antoka amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ao anatin’ny herintaona. Hiasa amina faritra efatra eto Madagasikara ireo mpitsabo mpanampy ireo dia any amin’ny faritra Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Itasy ary Matsiatra Ambony.
Hisehatra amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ireo mpitsabo mpanampy hokaramain’ ny mpiara- miombon’antoka amin’ny minisiteran’ny Fahasalam-bahoaka ireo amin’ny alalan’ny tetikasan’ ny Banky iraisam-pirenena.
«Tanjona ny hampihenana ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka any amin’ireo faritra ireo izay faritra tena ahitana izany. Hisahana ny fitsaboana sy fandraisana an-tanana ny zaza any am-bohoka, hampiteraka ny reny sy hanara-maso ny fahasalamany amin’ny fitondrany vohoka, hana- tanteraka ny fanaovam-baksiny sy fanaraha-maso ara-pahasalamana sy ny zaza ireo mpitsabo mpanampy ireo. Hanamafy ny fanentanana amin’ ny fampiasana fomba fandrindram-piterahana sy ny ady amin’ny aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo ary hampianatra ny fomba fampisakafoanana ihany koa izy ireo», hoy ny Dr Rakotoarivony Manitra, talen’ny Fampi- roboroboana ny faha
salamana eo anivon’ny minisitera.
Fahasoavana :: Renim-pianakaviana 28 taona niteraka kambana efa-dahy
FANAKORONTANANA FAMATSIANA HERINARATRA :: Misy minia mamotika ireo fotodrafitrasan’ny JIRAMA